(Video) Garaad Jaamacoow Khaatumo laba maaha! Hadiise Aad Rabtid Inaad Wax Saxdid…. | Daldoon Ugu Kaalay Wararkii Ugu Danbeeyey
(Video) Garaad Jaamacoow Khaatumo laba maaha! Hadiise Aad Rabtid Inaad Wax Saxdid….
Khaatumo waa calaamad kala qaybsanaan, waa calaamad khilaaf, waxay ku bilaabantay khilaaf waxyna ku hoyatay Hargeysa iyadoo khilaafkeedii xambaarsan. Ilaahay ha isu barakeeyo iyada iyo Hargeysa.
Khaatumo Maxay soo kordhisay? Waxay soo kordhisay dhiig sokeeye oo daata. Waxay soo kordhisay tafaraaruq, waxay soo kordhisay barakac, waxay soo kordhisay degaanno cusub oo gacanta Somaliland gala, waxay soo kordhisay colaad la dhexdhigo raasas nabad u wada deggannaa degaannadooda (Taleex, Xuddun, Dharkayngeenyo, Dhummay iwm). Waxay soo kordhisay Madaxdhaqameedkii iyo dadkay madaxda u ahaayeen oo la iska horkeeno, waxay soo kordhisay in cumaamadihii Isimmada la gubo, waxay soo kordhisay in Isimmadii la yidhaahdo waa laydin casilay! Waxay soo kordhisay in Isimmo-ku-sheegyo loo cumaamado. Waxay soo kodhisay in saxaafadda laga caytamo oo qof, qabiil, iyo maamulloba aan waxba loola hadhin (Aflagaaddadii baa la jideeyey).
iyo in intaa dabadeed sidii talo midaysan loo qaadan lahaa iyadoo dhammaan duruufaha inagu gedaaman dhammaantood la qiimaynayo.